Caqiidada Islaamka: Su’aalo iyo Jawaabo
Omhassan bokförlag, Stockholm, 2006
ISBN: 91-631-8290-4 - Diinta islaamka
Qaabka kitaabkani u qoran yahay waa hab su’aal iyo jawaab ah. Wuxuu ka koobanyahay 246 su’aalood iyo jawaabahooda oo si kooban u dhigan . Waa hab xiiso badan oo soo jiidan kara dareenka akhristaha isla markaana aan lagu daalahayn.
Cabdibashiir Cali (Maxamed Xirsi) waxa uu qoray buugaag dhowr ah oo aad u muhiim ah. Buugaagtaas waxaa ka mid ah buugga Dáyarta Sweden oo aad loo jeclaystay iyo buug runtii dad badan baskaxdooda ka shaqaysiiyey hurdadiina ka kiciyey oo la yidhaa Dumar talo ma laga dayey. QIIME: 100 Swedish krone (Iswiidhan gudaheeda). Wixii Iswiidhan ka baxsan waa $10 oo aan kharashka boostadu ku jirin. Toban cisho gudahood ayuu kugu soo gaadhi doonaa Insha Allah.
Akhriste - 2006-02-25 02:49:44
maxamed c/laahi - sadiiqyare20@hotmail.com
waad salaaman tihin dhamaan idaacada bbc da waan idin